Maxey tahay sababtii keydka loo geliyay Lionel Messi & Sergio Busquets Kulankii Athletic Bilbao? – Bandhiga
Maxey tahay sababtii keydka loo geliyay Lionel Messi & Sergio Busquets Kulankii Athletic Bilbao?
Barcelona ayaa barbaro 1-1 ah gurigeeda Camp Nou kula gashay kooxda Athletic Bilbao, waxeyna aheyd markii labaad oo ay kooxda reer Catalan dhibco lumiso kulamada horyaalka fasalkaan, qof walba wuxuu dhaliilay doorashadii tababare Ernesto Valverde ee kulankii shalay balse si adag ayuu isku difaacay.
Valverde wuxuu go’aan ku gaaray inuu isbadalo badan sameeyo kulankii Bilbao, waana kooxda lumineysay 14-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay soo booqato garoonkaan, wuxuuna macalinka reer Spain aaminsan yahay in go’aamadiisa ay u fiicnaayeen kooxdiisa.
Hadal uu saxaafadda siiyay tababaraha ayaa sidan ahaa “Marka aan go’aanka qaadanayay, waxaan ku fakaray waxa u fiican ciyaartoydeyda iyo kooxdeyda” ayuu yiri tababare Ernesto Valverde oo la hadlayay saxaafadda kadib kulanka.
“Waxaan go’aanka qaataa ka hor intaan la ciyaarin, ma qaato go’aamada kadib kulanka ama dibna uguma noqdo”
“Taageerayaasha waxey go’aansadaan waxa ay ku fakareen iney haboon tahay, balse waxaan u baahanahay inaan ku fakaro waxa u fiican kooxdeyda”
“Masuuliyadda wa dhankeyga, waxaan leenahay 10-maalmood afar kulan, waxaan u maleynayaa in Leo iyo Busquets aan nasiyo inagoo og inaan wajaheyno kulan aad u adag arbacada”
“Waan ogaa inuu ahaa go’aan qatar leh, balse hadii aan wax fician sameyn laheyn, sheekooyinkaas ima aadan weydiiseen”